လုံး၀လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ TONYMOLYရဲ့ Big3 Sale – YANGON STYLE
တခါမှ မရဘူး​သေးတဲ့ ​စျေးနှုန်း​တွေနဲ့ အခုကာလပဲ ​လျော့​ပေးတဲ့ TONYMOLYရဲ့ Happy Price​လေး​တွေ လာပါပြီ။
​လျော့ပြီးသားစျေး​တွေကိုမှ ထပ်​လျော့​ပေးထားတာ​နော်။ ဘယ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့…
1. Wonder Toner (500ml)
Ceramide Toner, Rice Toner, Tea Tree Toner
For 1pc: Price: 23000>> *14800*
2. Green Tea Set
Price: 56000>> 38800>>*33800*
3.Gold 24K Snail Set
Price: 120000>> 68000>>*52000*
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စျေးချထားတာဆိုပြီး ပစ္စည်းရဲ့ ကွာလတီကိုတော့ အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်။ ကွာလတီက ရူးသွားမယ်။ သူတို့ရဲ့ ကွာလတီအကြောင်းကို နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်။
Wonder Ceramide Mochi Toner(500ml)
Moisture နဲ့ Nutritionကို အသား​အ​ရေ အတွင်းပိုင်းက​နေ ဖြည့်တင်း​ပေးတဲ့ Ceramide Mochi Toner~
သုံးလို့​ကောင်းလို့ သုံးဖူးသူတိုင်း ကြိုက်ကြတဲ့~ အသားအ​ရေကို စိုအိသွား​စေတဲ့~ Ceramide Toner!
Ceramide 5000 ppb ပါဝင်ပါတယ်
Ceramideက အသားအ​ရေ အတွင်းပိုင်းက​နေ ​ရေဓါတ်အလွှာကို ပြည့်ဝ​အောင် ဖြည့်တင်း​ပေးလိုက်လို့ အသားအ​ရေအ​ပေါ်ယံလွှာ​ကိုလည်း ပိုမိုကြံ့ခိုင်​ပြီး တင်းတင်း​လေးနဲ့ ကျန်းမာ နုပျိုတဲ့ အသားအ​ရေကို ပိုင်ဆိုင်​စေပါတယ်။
Panthenolနဲ့ Hyaluronic acid ​​တွေက အသားအ​ရေကို ​ရေဓါတ်ကို ဖြည့်တင်း​ပေးတဲ့ အပြင် မဆုံးရှုံး​အောင်ပါ ထိန်းထား​ပေးလို့ အမြဲတန်း အသား​လေးက စိုအိ​နေ​စေပါတယ်~
Canella asiatica extractကလည်း အသားအ​ရေကို ​အေး​အေး​လေးနဲ့ soothing လုပ်​ပေးပါတယ်!!
အသားအ​ရေ ​ခြောက်​သွေ့သူများ၊အသားအ​ရေကို ရေဓါတ် အာဟာရ ဖြည့်ချင်သူများ၊ အသားအ​ရေ စိုပြီးတင်းတင်း​လေး ဖြစ်ချင်သူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
[TONYMOLY] Wonder Rice Smoothing Toner(500ml)
အချဥ်​ဖောက် fermented Riceက အသားအ​ရေကို Smooth လုပ်​ပေးမယ်။ သူ့မှာတော့ Rice ferment fetrate 10000ppm ပါဝင်ပါတယ်
အသားအ​ရေမှာ လိုအပ်တဲ့ ​ရေဓါတ်ကို ဖြည့်တင်း​ပေးပါတယ်~
အသားအ​ရေမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်​သေ၊ အညစ်အ​ကြေး​တွေကို ထိထိ​ရောက်​ရောက်သန့်စင် ဖယ်ရှား​ပေးပါတယ်~
အသားအ​ရေကို နူးညံ့ ​ချောမွတ် ကြည်လင်​စေပါတယ်~
Soothing effectပါပြီး လိမ်းလိုက်ရင်လည်း ​အေး​အေး​လေးနဲ့ Fresh ဖြစ်​စေပါတယ်~
အသားအ​ရေ ဆဲလ်​သေများပြီး ကြမ်း​နေသူများ၊ အသားအ​ရေ ​ရေဓါတ် ဖြည့်ချင်သူများ အတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
Wonder Pore Fresh Toner
အဆီပြန်ပြီး မျက်နှာကြီး မဲ​နေရင်တော့Tea Tree Pore Fresh Toner​လေးနဲ့ တွဲသုံးကြည့်လိုက်ပါ!!
အဆီထိန်းပြီး အသား​လေးပါ ကြည်လင်​ချောမွတ်သွားမယ်~
Pore Care,ချွေး​ပေါက်အတွက် ​အရမ်းကောင်းတဲ့
Tea tree extract 50000ppb ပါဝင်ပါတယ်~
Sebum Control ပါလို့ အဆီပြန်တာကို ထိန်းချုပ်​​ပေးပြီး အသားအ​ရေကို ကြည်လင်လန်းဆန်း​စေပါတယ်~
​ချွေး​ပေါက်​လေး​တွေကိုလည်း ကျဥ်း​ပေးပြီး အသားအ​ရေကို ကျစ်လျစ်​စေပါတယ်~
Soft peeling effectပါလို့ ဆဲလ်​သေအညစ်အ​​ကြေးနဲ့ အသားကြမ်းတာ​တွေကို ဖယ်ရှား​ပေးပါတယ်~
Cypress water& leaf extract (ထင်းရှုး)ပါဝင်လို့ ပိုပြီး fresh ဖြစ်​စေပြီး အသားအ​ရေကို ​အေးမြလန်းဆန်း​စေပါတယ်~
Hydration effectပါလို့ ​ချွေး​ပေါက်​လေး​တွေကိုလည်း ​ရေဓါတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်း​ပေးပါတယ်~
အဆီပြန်တာ ထိန်းချင်သူများ၊ ချွေး​ပေါက်ကျဥ်းချင်သူများ အတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
2.GREEN TEA SET
[GREEN TEA SKIN CARE LINE]
Tonymoly Green teaနဲ့ ရေဓာတ်အပြည့်ဝဆုံး~ အစိုပြည်ဆုံး~ အကြည်လင်ဆုံး~ အသားအရေကိုရယူလိုက်ပါ။
ကျန်းမာကြည်လင်စိုပြည်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့~ အသားအရေကိုလည်း ပုံမှန်လေး ရေဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုတယ်နော်!!
ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့
အသားအရေ အိုမင်းရင့်ရော်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
အသားအရေ အဆီပြန်မှု လွန်ကဲခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဒဏ်တွေကို ပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိလာစေခြင်း
စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်တာကြောင့် အသားအရေတိုင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်!
သဘာဝအချည်ဖောက် green tea extractကတော့ ရိုးရိုး green tea extractထက် Antioxidant effectနဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့နေရာမှာ၂၀%လောက် ပိုမို သာလွန်ကောင်းမွန်ပါတာကြောင့် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ effectကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Greentea skin care lineမှာ ပါဝင်တဲ့ Ingredients တွေကလည်း EWGမှာ GREEN GRADE ရထားပြီး ဖြစ်လို့~ လုံးဝ Pure mild ဖြစ်လို့~ Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်တွေပါ စိတ်ချလက်ချ သုံးလို့ရပါတယ်။
ရေဓာတ် အဓိက ဖြည့်တင်းပေးတာဖြစ်လို့ အဆီပြန်ခြင်း မရှိပါဘူး။
အသားအရေတိုင်း ရေဓာတ်လိုအပ်တာကြောင့် အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ၊ sensitive အသားအရေ၊ normal အသားအရေ၊ combination အသားအရေ, ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေ အကုန်လုံး သုံးနိုင်ပါတယ်~ (အသား အရမ်းခြောက်တက်ရင်တော့ တခြား moisture, nourishing effectကောင်းတဲ့ skin care ၁ခုခုနဲ့ပါ တွဲလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်)
Skin irritation test completed!!
(အသားအရေကို လှုံ့ဆော်မှု မရှိကြောင်း စမ်းသပ်ပြီး)
100% pure green tea ferment extract!!
Green tea Toner Emulsion Set
Gold 24K Snail line
[Whitening, Anti- wrinkle, Moisturizing &
အစိုဓာတ် ဖြည့်တင်းမှုအားကောင်းပြီး အသားအရေပြုပြင်မှုအားကောင်းတဲ့ snail slime~
အသားအရေ အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားပေးပြီး ကြည်လင် ဝင်းလဲ့တောက်ပစေတဲ့ 24K Gold~
Ginseng callusနဲ့ EGF~ စတာတွေပါဝင်ပြီး Moistirizing, Elasticity, Nourishing Skin Care Effectတွေ ကောင်းတဲ့ 24K Snail line~
Gold 24K snail Toner+ Emulsion Set 120000>>52000
အပေါ်ကပြောပြခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အရမ်းပဲသုံးချင်လှပါပြီဆိုရင်တော မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ TONYMOLY ဆိုငတွေဖြစ်တဲ့
1. Junction City, ဒုတိယထပ်။
2. Junction Maw tin, မြေညီထပ်။
3. Junction Square, မြေညီထပ်။
4. Myanmar Plaza, ပထမထပ်။
5. Hledan Centre, ပထမထပ်။
1. Yadanar Pon Diamond Plaza, မြေညီထပ်။
2. Mingalar Mandalay Ocean, မြေညီထပ်။
3. The Capital Centre, level 2(ဒုတိယထပ်)။
*မြိုင်ရတနာ ဈေးလမ်းမပေါ် ၊ မြိုင်ရတနာ (၄) ထပ်ဈေး​​​​​ ​​​​​ရှေ့၊ ၂ထပ်ဆိုင်တန်း။
*Ocean Super Center, မြေညီထပ်။
*ရွှေဝတ်ရည် အဆင့်မြင့်အိမ်ယာ၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်​အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မဈေးမြောက်ဘက်။ (မိုးယံထီဆိုင် ၂ဆိုင်​ကျော်)
***online delivery လည်း ရပါတယ်နော်**** အသေးစိတ်ကိုတော့ TONYMOLY ရဲ့ ဖေစ့်ဘွတ် စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/Tonymoly.mm/ မှာသွားရောက်မေးမြန်း၀ယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။